Poland ayaa ku dhawaaqday xaalad deg -deg ah oo ka jirta xadka Belarus sababo la xiriira qulqulka muhaajiriinta sharci darada ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Booland News » Poland ayaa ku dhawaaqday xaalad deg -deg ah oo ka jirta xadka Belarus sababo la xiriira qulqulka muhaajiriinta sharci darada ah
Belarus Jebinta Wararka • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Booland News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Kaligii taliyihii Belarusiya Alexander Lukashenko ayaa ku dhawaaqay in maamulkiisu uusan mar dambe isku dayi doonin inuu joojiyo muhaajiriinta u gudbaya Midowga Yurub ka dib markii xubnahooda ay ku soo rogeen cunaqabateyn ka dhan ah Belarus doorashadii madaxtinimada ee musuqmaasuqa ee 2020, oo uu sameeyay Lukashenko.
Tirada muhaajiriinta sharci -darrada ku jooga Poland ayaa aad kor ugu kacday.
Xaalad degdeg ah ayaa lagaga dhawaaqay xadka Poland iyo Belarus.
Belarus waxay caawineysaa oo sii wadaysaa socdaalka sharci darrada ah ee Poland iyo waddamada kale ee Midowga Yurub.
Madaxweynaha Poland ayaa xaalad deg -deg ah ku soo rogay laba gobol oo xuduud la leh Belarus sababtuna ay tahay kororka xad -dhaafka ah ee soohdinta muhaajiriinta sharci -darrada ah.
Tani waa markii ugu horreysay taariikhda waddanka ka dib Shuuciyaddii xaaladda degdegga ah ee lagu soo rogay xuduuddeeda- Poland waligeed ma soo bandhigin tillaabooyin noocan oo kale ah, waxayna ka fogaatay in lagu soo rogo mid xitaa xilliyada ugu adag ee masiibada COVID-19, in kasta oo ay jiraan baaqyo loo jeedinayo dowladda inay sidaas sameyso.
Xaaladda degdegga ah waxay sii jiri doontaa ugu yaraan 30 maalmood.
“Madaxweynuhu wuxuu go’aansaday inuu… ku soo rogo xaalad degdeg ah aagagga ay u qoondeeyeen Golaha Wasiirradu,” afhayeenka Duda, Blazej Spychalski, ayaa shir jaraa’id ku sheegay Khamiista.
Spychalski ayaa yidhi "Xaaladda xadka Belarus waa mid adag oo khatar ah." "Maanta, annaga oo ah Poland, oo mas'uul ka ah xuduudahayada, laakiin sidoo kale xuduudaha Midowga Yurub, waa inaan qaadnaa tallaabooyin lagu xaqiijinayo amniga Poland iyo Midowga Yurub."
Talaadadii, dawladdu waxay si rasmi ah uga codsatay Duda inay ku soo rogto xaaladda degdegga ah aagagga qaar ee gobollada Podlaskie ee bariga Poland iyo Lubelskie oo xuduud la leh Belarus. Amarkan ayaa lagu dabaqi doonaa wadar ahaan 183 degmo oo si toos ah ugu xiga soohdinta waxaana laga dhisi doonaa aag saddex-kilomitir ah oo ku teedsan soohdinta Belarus.
Tallaabadan ayaan weli ansixin aqalka hoose ee baarlamaanka Poland - Sejm. Waxaa loo qorsheeyay in ay ka shiraan arrintan Jimcaha ama Isniinta, sida ay ku warrantay warbaahinta Poland.
Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay sii kordhayaan tahriibka sharci darrada ah ee ay Poland iyo qaar ka mid ah waddamada Baltic -ga wajahayeen bilihii la soo dhaafay. Kumanaan muhaajiriin sharci -darro ah oo la rumeysan yahay inay ka safrayaan Bariga Dhexe ayaa ka tallaabay ama isku dayay inay u gudbaan Latvia, Lithuania iyo Poland iyagoo ka yimid Belarus oo deris la ah muddadaas.
Ilaalada xadka Poland ayaa Arbacadii sheegay in bishii Agoosto oo keliya la arkay wadar ahaan 3,500 oo muhaajiriin ah oo isku dayay inay Poland ka galaan Belarus. Ilaaladu waxay ka hortageen 2,500 oo isku dayo noocaas ah.
Horumarka ayaa durbadiiba ku kalifay Warsaw inay u dirto ciidamo si ay u dhisaan 2.5 mitir oo dherer ah oo silig-maroojin ah oo loogu talagalay in lagu fidiyo inta badan xadka 150-kiiloomitir (93-mayl) ee Belarus.
The EU wuxuu hore ugu eedeeyay Belarus inay ku kacday “weerar toos ah” oo ay isku dayday inay “u adeegsato bini’aadamka ujeeddooyin siyaasadeed” iyada oo muhaajiriinta ku riixday xuduudaha dalalka xubnaha ka ah. Vilnius ayaa sidoo kale ku eedeeyay Minsk inay ka soo duushay muhaajiriinta ka timid dibedda oo ay ku xirtay xadka qaab dagaal.